झापामा पनि पिर्के सलामी « Sajilokhabar
झापामा पनि पिर्के सलामी
प्रकाशित मिति :7July, 2019
झापा, २२ असार । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशु नेपालले लिएको सलामी तस्वीर सेलाउन नपाउँदै जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले लिएको सलामी भाइरल बनेको छ । पोर्तेलले शनिवार झापाको चन्द्रगढीमा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा सलामी लिएका थिए । रातो कपडा ओढाएको सानो टेवलमा चढेर लिएको सलामी तस्वीर अहिले भाइरल भएको छ ।
सामाजीक सञ्जालमा तस्वीर एकाएक भाइरल भएपछि पोर्तेलले फेसबुकमा आयोजकले दिएको भूमिका निर्वाह गरेको भनेर सलामीको बचाउ गरेका छन् । र, उनले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको आसय व्यक्त गर्दै दोस आयोजकमा थोपरेका छन् ।
काँकरभिट्टामा केही समय अघि सम्पन्न १ नम्बर प्रदेश स्तरीय तेक्वान्दो तथा कवडी प्रतियोगितामा पनि प्रदेस सभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीलाई सलामी दिइएको थियो । पिर्के सलामीको एक पछि अर्को आलोचना भए पनि जनप्रतिनिधि सलामी ग्रहण गर्न छाडका छैनन् । काँकरभिट्टामा पनि प्रदेस सभा सदस्य मैनालीले पिर्के सलामी लिए । मैनालीको तस्व्रि खासै भाइरल नभए पनि जिसस प्रमुख पोर्तेलको तस्वीर भने एकाएक भाइरल भएको छ ।
प्रदेस सभा सदस्य मैनाली
धनकुटा महालक्ष्मी नगरप्रमुखको तस्वीर भाइरल भएको तीन साता वित्न नपाउँदै पोर्तेल पनि सामाजीक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । नगरप्रमुख नेपालले एक कार्यक्रममा लिएको सलामी सामाजीक सञ्जालमा निकैदिन भाइरल भएको थियो । उनी निकै आलोचित भए । उनले अन्जानमा गल्ति भएको स्वीकार पनि गरे ।
तरपनि उनलाई खिसिटिउरी गर्नेदेखि गणतन्त्रका छोटे राजा, गणतन्त्रको उपहार जस्ता अनेक उपमा दिए । कतिपयले टेवलमाथि चढेर उनले लिएको सलामी फोटोलाई फोटोसपबाट बाँसको टुप्पोमा चढेर सलामी लिएको बनाएर सामाजीक सञ्जलामा प्रयोग गरे ।
महालक्ष्मी नगरप्रमुख परशु नेपाल
फोटोसपबाट बिगारिएको तस्वीर
धनकुटा महालक्ष्मी नगरप्रमुखको फोटो भाइरल भएसँगै संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतका जाप्रितिनिधिलाई सलामी लिएका तस्वीर भाइरल भए । ओखलढुङ्गाका प्रदेस सभा सदस्य मोहनकुमार खड्का र अर्का प्रदेस सभा सदस्य अम्बिरबाबु गुरुङले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा पिर्कामाथि लिएका सलामी भाइरल भयो र उनीहरुको तस्वीर राखेर पिर्के सलामी भनियो ।
नेपाली काँग्रृसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लिएको सलामी होस वा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट रातो कार्पेटमा हिँडेको तस्वीर नागरिकबाट निकै आलोचित भए । नागरिकले प्रश्न गरे जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सलामी किन ? गाणतन्त्रमा जनप्रतिनिधि आमनागरिक भन्दा माथि हुन् ? वडा वडा र टोल टोलमा सलामी दिनुको अर्थ र औचित्य के हो ?
सलामी नेपालको साँस्कृतिक र मौलिक पहिचान होइन । यो सामन्तवादी संस्कारको उपज हो । यद्धपी, समयक्रमसँगै सेना, प्रहरीमा गरिने एक प्रकारको अभिवादन हो । पञ्चायतकालमा राजा, रानी, प्रधानमन्त्री लगायत अति विशिष्ठ व्यक्तिलाई मात्र सलामी दिइन्थ्यो ।
बहुदल कालमा पनि त्यस्तै थियो । मन्त्री मध्ये गृहमन्त्री प्रहरीको कार्यक्रममा आउँदा सलामी लिन्थे । तर, गाणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सलामी त्यति धेरै बदनाम भएको थिएन । तर, प्रदेस र स्थानीय निर्वाचन पछि भने सलामी खिसिटिउरीको विषय बन्न थालेको छ । टोल टोलमा दिइने सलामीप्रति नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
जनप्रतिनिधिमा कस्तो स्वागत स्वीकार गर्ने वा प्रमुअ अतिथिलाई कार्यक्रमको पूर्व जानकारी नहुने, सम्मानका नामा ढर्रा र चाकडी गर्ने सोँचले जनप्रतिनिधि बिवादमा तानिएका छन् । कुन सम्मान कहाँ गर्ने, कस्ते अवस्थामा गर्ने भन्ने सामान्य चेतनाको कमीले समस्या हुने गरेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि अन्जानमै सलामीका कारण बिवादमा तानिएका छन् ।
गलत मनशाय नहुँदा पनि सजकता नअपनाउँदा बिवादमा तानिएका छन् । जुन चिज बिवादित हुन्छ वा नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन् भन्ने चेत नराख्ने, अरुले गरेका गल्तीबाट पटक्कै नसिक्ने सोँचले जनप्रतिनिधि सलामी गल्ती दोहोर्याउँदै छन् ।
नेकपाका जनप्रतिनिधि पनि पिर्के, मेच र कार्पेट सलामी लिइरहेका छन् । समानाता, समानता भन्दै आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर लडेको भुसुक्कै विर्सिएका छन् । सरकारमा गएर दुनियाँ बदल्ने कसम खाएका माक्र्सवादी जनप्रतिनिधि आफैँ सामन्ती संस्कारमा बदलिए । आफ्नो कार्यालयलाई सिंहदरबार ठान्ने, आफुलाई जनताको सेवक होइन, साशक ठान्दा एकपछि आर्को गल्ती हुँदैछ । जनताका सेवाका लागि होइन, मान, सम्मानन र खातिरीका लागि आफु निर्वाचित भएको ठान्दा समस्या भएको हो ।
ओखलढुङ्गाका प्रदेस सभा सदस्य मोहनकुमार खड्का
नेपालको सताक्षीधाममा हुने १०८ कुण्ड कोटीहोमको भारतमा चर्चा
झापा, २७ असोज । नेपालमा पहिलो पटक गौ संरक्षण गर्ने उद्देश्यले झापाको सताक्षीधानमा आयोजना गर्न
‘महराको बलात्कार स्क्यानडल’ नेपाली वाटरगेट काण्ड
कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लागेको घटना सार्वजनिकभएको २४ घण्टा नबित्दै उनी सभामुखपदत्याग गर्न बाध्य भए
राजीनामा होइन, महरालाई पक्राउ गर
काठमाडौँ, १४ असोज । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफुमाथि लागेको बलात्कारको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा प्रगतिशिल समूहको पराजयका यस्ता छन् कारण
काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहको ‘प्यानल’ नै विजयी